Chivabvu 29, 2018 arun
Japan kuona 6 itsva crypto exchanges
muJapan 6 kuuya crypto platforms vari raparurwa nesangano paruzhinji nemakambani dzakanyorwa pamusoro Tokyo Stock Exchange.
Makambani aya akaratidza izvi ndiyo nguva yavo yokutanga kuita bhizimisi somunhu cryptocurrency Exchange pakakwirira.
Bithumb Exchange dzairambidzwa basa redu vanotengesa 11 nyika
Mumwe South Korea guru cryptocurrency exchanges, Bithumb, akazivisa zviri irambidzwe digitaalinen twa wokuita zvemusika dzakawanda, kusanganisira North Korea, Iran, Iraq uye Sri Lanka, pamwe nemamwe nzvimbo nomwe.
nyika idzi dzave wakanyorwa somupristi ngozi nokuda Non-Cooperative Countries uye Territories (NCCT) danho rekutanga.
Next Post:Chii cryptocurrency vari vanoita zano kutengesa, uye izvo munhu kuchengeta?